Abahlinzeki bePoly Print Scarf kanye neFektri - China Poly Print Scarf Manufacturers
Isikhafu se-polyester esinciphile
Lapho ufaka isikhafu, ukunakekelwa okuthambile nokunomusa kwesikhumba, ake uzizwe ukhululekile usuku lonke. Usayizi ongenisiwe we-100% we-polyester: 35 ″ x 35 ″ / 86cm x 86cm, isikwele, usayizi wethayela.Size meet isicelo seklayenti. Okubalulekile: I-100% polyester Design: Izinhlobo ezahlukahlukene zedizayini namaphethini aphrintiwe ngokucophelela (ukuphrinta ngohlangothi olulodwa), imibala emihle emihle, amaphethini amahle kakhulu. Ukupakisha ibhokisi lesipho. Kufanelekile: Isikwele bandana, isikulufa sezinwele esisezingeni eliphezulu. Ingasetshenziswa unyaka wonke. Ungagqoka entanyeni, ekhanda, kuma ...
Isikhafu se-polyester esiphefumulwayo
Isikhafu se-polyester esithambile
Isikhafu sokuphrinta se-viscose esingu-100%
Olingisa isikhafu isikhafu itshali